काठमाण्डौं, झापा, कैलाली र ताप्लेजुङ्ग क्वाटर फाईनलमा – Sero Fero News
Home/Featured/काठमाण्डौं, झापा, कैलाली र ताप्लेजुङ्ग क्वाटर फाईनलमा
काठमाण्डौं, झापा, कैलाली र ताप्लेजुङ्ग क्वाटर फाईनलमा
June 4, 2017	Featured, Trending News, खेल, प्रदेश ५, मुख्य समाचार Leaveacomment 37 Views
एन्फा महिला लीग च्याम्पियनशिप फुटबल
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आयोजनामा भएको एन्फा महिला च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगितामा काठमाण्डौं, झापा, कैलाली र ताप्लेजुङ्ग क्वाटर फाईनलमा प्रवेश गरेको छ । आईतबार सम्पन्न लिग चरणमा काठमाण्डौं सात, झापा छ, ताप्लेजुङ्ग नौ र कैलाली छ अंक सहित नक आउट चरणमा प्रवेश गरेका हुन् ।
तानसेनको टुँडिखेल मैदानमा जारी प्रतियोगितामा आईतबार कैलाली र ताप्लेजुङ्ग विजयी भएका हुन् । बिहान भएको खेलमा कैलालीले चितवनलाई शून्यका विरुद्ध पाँच गोलको जित निकालेको थियो । चितवनका लागि गंगा अधिकारीले दुई, सुस्मिता दवाली, महिमा र हेमा चौधरीले एक–एक गोल गरेका हुन् । जितसँगै कैलाली क्वाटर फाईनलमा प्रवेश गरेको हो । दोस्रो खेलमा सप्तरी र सिन्धुली बराबर खेलेका हुन् । लिग टेबलका आधारमा खेलिएका् खेलमा दुवै जिल्ला क्वाटर फाइनल खेल्न भने सकेनन् । सप्तरी अंक तालिकामा दुई र सिन्धुलीको एक अंक रहेको एन्फा पाल्पाका अध्यक्ष भीमसेन कार्कीले बताए ।
आईतबार दिउँसो ४ बजे भएको तेस्रो खेलमा ताप्लेजुङ्गले सिन्धुपाल्चोकलाई ताप्लेजुङ्गले शुन्यका विरुद्ध पाँच गोल गरेको थियो । ताप्लेजुङ्गका लागि अनुष्का शेर्पा र गिता राना मगरले दुई दुई तथा भुजुङ्ग राईले एक गोलको योगदान गरेको रेफ्री एसेसर श्रीराम रञ्जितकारले बताए ।
चौध जिल्लाको सहभागिता रहेको खेलबाट भोजपुर, कञ्चनपुर, मकवानपुर, दाङ्ग, महोत्तरी, सिन्धुली, सप्तरी, उदयपुर, चितवन र सिन्धुपाल्चोक बाहिरिएका छन् । वालिङ्गको खेल मैदान र तानसेनको टुँडिखेलबाट छनौट भएका खेलाडीहरुको फाईनल खेल जेठ २६ गते टुँडिखेलमा हुने छ । सोमबार दिउँसो दुई बजे काठमाण्डौ र झापा तथा चार बजे कैलाली र ताप्लेजुङ्ग बिच नक आउट खेल हुने एन्फा पाल्पाले जनाएको छ ।
Previous विवाह नै नगरी विधवा, ९० लाख क्षतिपूर्ति !
Next पाल्पामा मतदान सम्पन्न झण्डै ८ प्रतिशत बदर ! (फोटो फिचर सहित)